Lucas Vázquez oo fariin ku aadan koobka FIFA Club World Cup u diray kooxdiisa Real Madrid – Gool FM
(Real Madrid) 16 Dis 2018. Xidiga kooxda Real Madrid Lucas Vázquez ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa ay dooneyso inay ku guuleysato koobka kooxaha aduunka ee Club World Cup kaasoo ay ku ciyaari doonaan Abu Dhabi.
Subaxnimadan Axada ah ayay ciyaartoyda kooxda Real Madrid u duuleen Abu Dhabi, si ay ugu diyaar garoobaan kulankooda ugu horeeya ay kula ciyaari doonaan kooxda Kashima Antlers tartankan maalinta Arbacada ee soo aadan.
Hadaba wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu bixiyay Lucas Vázquez kahor kulanka ay Arbacada la qaadan doonaan kooxda Kashima.
“Waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano koobka FIFA Club World Cup sanadka saddexaad ee xiriir ah, mana fududa in sidaas la sameeyo”.
“Waa inaan diirada saarnaa kulanka soo aadan aan la ciyaari doono Kashima Antlers, sababtoo ah Real Madrid waxay ku qaadatay mudo dheer si ay kaga guuleysato”.
Real Madrid ayaa guul dirqi ah kaga gaartay kooxda reer Japan finalkii koobka FIFA Club World Cup ee 2016-kii, kulanka oo lagu daray 30 daqiiqo dheeri ah ayaa wuxuu ku soo idlaaday 4-2.
“Sirta ka dambeysa inaan ku guuleysano koobka Club World Cup mudada saddexdii xili ciyaareed ee lasoo dhaafay ayaa ah inaan u shaqeenay si wada jir ah, dhamaanteena waxaan ku soconay hal wado”.
“Shaqada aan qabaneyno, xawaaraha iyo gooldhalinta ayaa nagu hogaamin karta inaan ku guuleysano koobab”.